Ungabhekana kanjani nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwezithandani | Bezzia
Ungabhekana kanjani nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwezithandani
UMaria Jose Roldan | 19/07/2021 22:40 | I-Psychology
Ukuhlala nomuntu onenkinga yokuphazamiseka kwengqondo kuyinto enzima ngempela, ikakhulukazi uma kungumlingani wakho. Akulula futhi uma ungazi ukuthi ungasiphatha kanjani lesi sifo, singadala ukuthi ubudlelwane buphele ngokuhamba kwesikhathi.
Ukugwema ukuthi umbhangqwana ube nesikhathi sokuphelelwa yisikhathi, Kubalulekile ukuthi izinhlangothi zombili zifune ukuxazulula isimo esinjalo futhi zifunde ukuhlala naso. Sizokunikeza uchungechunge lwemihlahlandlela ongayilandela ukuze ubudlelwano buqine ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokuphazamiseka kwengqondo kwelinye lamaqembu.
1 Sekela lezi zithandani
2 Funda ngokuphazamiseka kwengqondo
3 Vumela ochwepheshe basebenze
4 Ukubaluleka kokwelashwa
Sekela lezi zithandani
Akulula kunoma ngubani ukuthola ukuthi unokuphazamiseka kwengqondo, ikakhulukazi uma usebudlelwaneni. Kulokhu, omunye umuntu kufanele akubonise ukwesekwa kwabo ngokugcwele futhi akwenze ubone ngaso sonke isikhathi ukuthi awuwedwa. Ukuzizwa unomusa ngokuthola ukwesekwa nothando lomlingani wakho kubalulekile uma kukhulunywa ngokunqoba ukuphazamiseka kwengqondo okunje.
Funda ngokuphazamiseka kwengqondo
Lapho nje kutholakala ukuxilongwa okunokwethenjelwa ukuthi othandekayo unesifo sengqondo, sekuyisikhathi sokuqoqa imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka ngalesi sifo. Kuhle ukuya kochwepheshe abahlonishwayo noma amawebhusayithi asiza ukwazi okuningi ngokungahambi kahle okunjalo futhi ngale ndlela sisize lo mbhangqwana ngendlela efanelekile.
Vumela ochwepheshe basebenze
Ukufuna ukufunda ngalesi sifo akumniki umuntu ilungelo lokuba ngudokotela womlingani wakhe. Ngokunikezwe lokhu, kungcono ukuthi ochwepheshe benze umsebenzi wabo ngoba bayazi ukuthi benzani futhi bangasiza ekwelapheni lokho kuphazamiseka. Umsebenzi wabashadikazi kufanele kube ukuxhasa kukho konke okudingekayo nokubakhombisa uthando lapho bebadinga.
Kuhle ukukhumbula ukuthi umuntu ogulayo akakwazi ukudlulisela yonke imisebenzi kumlingani wakhe. Umuntu onenkinga enjalo kufanele athathe isabelo sakhe futhi enze konke okusemandleni ukuze akwazi ukunqoba ukuphazamiseka okunjalo futhi ukuthi ngale ndlela abulimazi ubuhlobo uqobo ngendlela engemihle.
Ukuya ekwelashweni kubaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokunqoba lesi sifo futhi ukuvimbela lesi sifo ekuqedeni konakalisa ubuhlobo. Ukwelulekwa kahle kusiza abashadikazi ukuthi bakwazi ukulawula imizwa eyahlukahlukene equbuka ngenxa yalokhu kuphazamiseka. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izithandani ziba nempilo enhle yize kunezinkinga ezingase ziqhamuke ngenxa yokuphila nokugula kwengqondo.
Ngamafuphi, akulula ukuhlala nomlingani okutholakale ukuthi unesifo sengqondo. Kodwa-ke, kungenzeka ukuba nobudlelwano obunempilo obuvumela bobabili abantu ukuthi baqinise uthando lwabo nothando lwabo. Into ebaluleke kakhulu ukwesekana futhi ube nentshisekelo yokwelapha ukuphazamiseka kwengqondo okunje. Kungaba ukuya ekwelashweni noma kochwepheshe, okwaziyo ukusiza umuntu ogulayo ukuthi anqobe izinkinga futhi anakekele nobudlelwano balaba abashadile.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Ungabhekana kanjani nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwezithandani
UZucchini ugcwele i-ratatouille nenkukhu
Khetha i-footrest enhle bese uthola induduzo